Ilaahay u Jeedso Sidaad Guur Farxad leh u Heshid | Reer Farxad Leh
KU AKHRI Abui Acholi Afrikaans Ahanta Ajië Albanian Alur American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Arabic (Tunisia) Argentinean Sign Language Armenian Assamese Ateso Aukan Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Balinese Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bolivian Sign Language Bomu Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cakchiquel Cambodian Catalan Cebuano Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Tiddim) Chinese (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Damara Dangme Danish Dayak Ngaju Digor Diola Douala Drehu Dusun Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik Emberá (Catío) English Esan Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Finnish Sign Language Fon Frafra French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Gitonga Greek Greenlandic Guarani Guarani (Bolivia) Guatemalan Sign Language Guerze Gujarati Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Hungarian Sign Language Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Jula Kabiye Kabyle Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kongo Korean Korean Sign Language Kpelle Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kurdish Sorani Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Macedonian Macua Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mandjak Maninkakan (Eastern) Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazahua Mazatec (Huautla) Mbukushu Mende Meru Mexican Sign Language Mingrelian Mixe Mixtec (Guerrero) Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Nambya Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Nepali New Zealand Sign Language Ngabere Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese Sign Language Pular Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Páez Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Southern Greece) Rumanyo Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Réunion Creole Samoan Sangir Sango Saramaccan Sarnami Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Serer Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shiinaha Mandarin (Fudud) Shona Shuar Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin Soomaali Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Susu Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Toraja Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Wolof Xhosa Xârâcùù Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
Ilaahay u Jeedso Sidaad Guur Farxad leh u Heshid
“Kii bilowgii uumay iyaga wuxuu ka dhigay lab iyo dhaddig” nin iyo naag.—Matayos 19:4
Ilaahay Yehowah * baa guur ku meheriyay ninkii iyo naagtii ugu horreeyay. Kitaabka wuxuu inoo sheegaa inuu Yehowah abuuray naagtii u horreysay oo markaasna “u keenay ninkii.” Aadan si weyn buu u farxay oo wuxuu yiri: “Tanu hadda waa laf ka mid ah lafahayga, iyo hilib ka mid ah hilibkayga.” (Bilowgii 2:22, 23) Ilaa hadda Yehowah wuxuu rabaa dadka is guursaday inay farxaan.
Markaad guursatid waxaad is oran kartaa wax walba aad bay u fiicnaan doonaan. Laakiin sida runta ah xitaa ninka iyo naagta aad isku jecel dhibaato bay la kulmaan. (1 Korintos 7:28) Buuggan waxaa ku jira tacliimo Kitaabeed oo haddii ad hirgelisid guurkaaga iyo reerkaagaba mid farxad leh ka dhigi karo.—Sabuurradii 19:8-11.
1 XILKA UU YEHOWAH KU SIIYAY KA SOO BAX
KITAABKA WUXUU BARAA: Ninku waa madaxa reerka.—Efesos 5:23.
Haddii ad nin naag leh tahay Yehowah wuxuu kaa rabaa inaad naagtaada si kalgacayl leh u dhaqaaleysid. (1 Butros 3:7) Naagta wuxuu u abuuray inay ninkeeda ku habboonaato wuxuuna doonayaa inaad sharaf iyo jacayl kula dhaqantid. (Bilowgii 2:18) Waxaa waajib ah inaad naagtaada aad u jeclaatid oo naftaada ka hormarisid.—Efesos 5:25-29.
Haddii ad tahay naag la qabo Yehowah wuxuu doonayaa inaad ninkaaga aad u maamuustid oo ku kaalmeysid inuu qaado xilkiisa. (1 Korintos 11:3; Efesos 5:33) Goʼaamadiisa ka dambee oo qalbigaaga oo dhan kula shaqee. (Kolosay 3:18) Markaad sidan yeeshid qurux baad ku yeelan doontaa Yehowah iyo ninkaagaba hortooda.—1 Butros 3:1-6.
Weyddii qofka ad guursatay sidaad nin ama naag fiican u noqon kartid. Si fiican u dhegeyso oo ku dadaal inaad is wanaajisid
Samir yeelo. Waqti bay qaadan doontaa inaad baratiin sida layskaga farxiyo
2 AAD U DANEE SIDUU QOFKA KALE DAREEMO
KITAABKA WUXUU BARAA: Waa inaad doondoontid waxa qofka ad guursatay u roon. (1 Korintos 10:24) Ninkaaga ama naagtaada qiimee. Xusuuso inuu Yehowah doonayo inay addoommadiisa ahaadaan kuwo “dadka u wada roon.” (2 Timoteyos 2:24) Feker intaadan wax oranin. Waayo hadalka laga fiirsan waa “sida seef wax mudaysa, laakiinse kan caqliga leh carrabkiisu waa caafimaad.” (Maahmaahyadii 12:18) Yehowah ruuxiisa baa ku caawin doono inaad dadka ugu roonaatid hadalkaaga oona jacayl ugu muujisid.—Galatiya 5:22, 23; Kolosay 4:6.
Intaadan wax muhim ah ka wadahadlin Ilaahay ka bari inuu degganaansho iyo maskax furan ku siiyo
Si fiican uga feker waxaad oran doontid iyo habka ad u oran doontid
3 SIDII KOOX U FEKERA
KITAABKA WUXUU BARAA: Markaad is guursatiin waxaad noqon doontaan “isku jidh.” (Matayos 19:5) Haddaba isku mid ma tihiin waxaad haysan kartaan fekrado kala duwan. Sidaas darteed barta inaad ku midowdaan fekerkiinna iyo dareenkiinnaba. (Filiboy 2:2) Marka goʼaan la gaarayo waxa ugu muhimsan waa heshiis. Kitaabka waxaa ku qoran: “Qasdi kasta waxaa lagu taagaa talo.” (Maahmaahyadii 20:18) Oggolow inay tacliimaha Kitaabka idin tilmaamaan markaad goʼaamo muhim ah isla gaaraysaan.—Maahmaahyadii 8:32, 33.
Ninkaaga ama naagtaada ha ku oran war iyo fekrado keliya laakiinse u sheeg sidaad dareemaysid
Intaadan ballan sameysan la tasho qofka kale
^ qayb. 4 Kitaabka wuxuu muujiyaa inuu Yehowah yahay magaca Ilaahay.
QOF MACQUUL AH OO WANAAG RAJEEYA NOQO
Ha iska filin inaadan waxba gafayn xaaskaagana ha ka filin. (Sabuurradii 103:14; Yacquub 3:2) Dooro inaad fiirisid qofka kale dabeecaddooda fiican. Ku kalsoonow inay tacliimaha Kitaabka shaqeeyaan oo dulqaad yeelo. (2 Timoteyos 3:16) Haddii ad Yehowah taladiisa raacdid wuu kuu abaalgudi doonaa guurkaagana sanad walba wuu sii xoogoobi doonaa.—Galatiya 6:9.
Qofka kale ma dareemaa inaan naftayda ka hormariyo?
Maanta sidee baan kan aan guursaday ugu muujiyay jacayl iyo xushmo?